Ungadliwa Kwezinhlanzi - Ukupheka Ukupheka | Ukupheka izindlela zokupheka (Ikhasi 2)
Ukudla kwasolwandle kukaFideuá
Ukudla kwasolwandle fideuá, okulungele ukulungiselela wonke umndeni, isidlo esimnandi kakhulu esigcwele ukunambitheka. Singayiphelezela nge-aioli.
Amazambane ne-hake stew
Ukujabulela amazinga okushisa apholile njengoba sinjalo, sithanda isitshulu samazambane kanye ne-hake njengale, awuvumi?
Chickpeas nge-broccoli ne-salmon ku-soy sauce
Lawa ma-chickpeas ane-broccoli ne-salmon ku-soy sauce avela kusidingo sokusebenzisa ngokunenzuzo okusele kwezinye izitsha. Qaphela!
Isitsha selayisi, i-broccoli ne-salmon ku-soy sauce
Lesi sitsha selayisi, i-broccoli ne-salmon ku-soy sauce isidlo esiphelele futhi esihlwabusayo ongasilungiselela ngesikhathi esifushane nangomzamo omncane
I-gilthead ebhakwe namazambane nolamula
I-gilthead ebhakwe namazambane nolamula, isidlo esilula, esinothile futhi esinempilo. I-gilthead ebhakwe ipuleti ephelele yokudla.
Isitshulu samazambane kanye ne-bonito esenyakatho
Kuleli sonto enyakatho amazinga okushisa ebepholile ngokwanele ukujabulela ukupheka lesi sitishi samazambane kanye ne-bonito esenyakatho.
Ilayisi ne-squid nophizi
Ukulungisa leli rayisi nge-squid nophizi akunazinkinga. Akusilo uhlelo oluhle lolo ngempelasonto?
Upelepele wePiquillo wagcwala i-hake kanye nama-prawn
I-pepper eqoshiwe ye-piquillo iyindlela enhle njengokuqalisa noma isidlo esikhulu. Lezi pepper zifakwe i-hake ne ...
Hake ngezinhlanzi zasolwandle
Uma lo Khisimusi uzokwamukela umndeni nabangane ekhaya lakho, le hake a la marinera iyi ...
I-hake eshaywe ngofulawa wommbila
I-hake eshaywe ngommbila, iresiphi ekahle yabantu abane-gluten ukungabekezelelani. Inhlanzi enamanzi futhi ecebile.
Ipepper eyosiwe, isisu no-anyanisi
Isaladi likapelepele othosiwe, isisu no-anyanisi esiwuphakamisa namuhla iresiphi elula futhi emnandi, ephelele njengokuqala.
inhlanzi eshaywayo ekhanda
Inhlanzi e-Crispy eshaywayo, isidlo esilula esigcwele ukunambitheka. Ilungele abancane abanenkinga yokudla izinhlanzi, ngakho-ke bazoyithanda kakhulu.
Namuhla ngikulethela le iresiphi enempilo emnandi, i-squid kusoso. Isitsha esimnandi futhi esilula ukulungiselela, ngawo ...
Hake ku-sauce yaseMelika
I-Hake ku-sauce yaseMelika iyindlela enhle yokuqedela imenyu yephathi. Ngabe ulokotha ukukulungiselela usuku olwandulela unyaka omusha?
Salmon nezibopho ne bearnaise sauce
Izinhlayiya salmon zanamuhla ezine-sauce ibhere namazambane nokuhlobisa isanqante kuyindlela enhle yeholide.
I-hake ishaywa ngesoso se-leek
I-hake eshaywa nge-sauce evuzayo esiyiphakamisayo namuhla ilungele ukuqeda amamenyu eqembu alandelayo. Izame!
I-Salmon enososo omnandi we-chili
I-salmon enososo omnandi wesiliphu esilungiselela namuhla ilula kakhulu futhi ingahambisana nelayisi, ukholifulawa noma i-quinoa ukwenza isidlo esiphelele ngokwengeziwe.
I-Cod gazinga ngokugqokwa kwe-mackerel
I-Cod Fry enambitheka ejwayelekile yaseningizimu yeSpain, isibiliboco esijwayelekile sase-Andalusi esingaphuthelwa ebusuku ehlobo
Izindlela zokupheka eziyi-8 zomndeni wonke
Izindlela zokupheka ezingama-cod eziyi-8 esiziphakamisayo namhlanje zizokuvumela ukuthi uthole okuningi kule nhlanzi enamafutha aphansi nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
Izinhlanzi ezibhakiwe ngamazambane nama-prawn
Izibopho zezinhlanzi namazambane nama-prawn, isidlo esilula esinempilo futhi esilula. Isitsha esiphelele, esingasilungisa nganoma iyiphi inhlanzi.
I-Salmon ku-pea puree
I-salmon ku-pea puree esiyiphakamisa namhlanje iresiphi ethile esetshenziswayo kodwa futhi emnandi futhi enempilo. Izame!
I-Ajoarriero cod iyi-classic ye-gastronomy yethu. Isitsha esilula, esisheshayo ukulungiselela futhi esihlwabusayo esikumema ukuba usizame.
Iresiphi yedourado cod, isidlo esijwayelekile sasePutukezi ongasisebenzisa ekhaya ngezinyathelo ezimbalwa ezilula. Ungaphuthelwa yile ndlela ehlukile futhi emnandi yokudla izinhlanzi.
Ikhodi ebhakwe nelayisi
Jabulela ngale recipe elula ye-Baked Cod, ehambisana nelayisi. Indlela emnandi yokupheka le nhlanzi emnandi futhi enempilo.
Isitshulu samazambane nge-cod
Isitshulu samazambane nesikhuni esisilungiselela namuhla simnandi kakhulu futhi siyaduduza. Kulula ukulungiselela, kuzofanela utshale imali, yebo, isikhathi esithile kuyo.
Ilayisi nge-cod nama-prawn
Uma uthatha isinqumo sokulungiselela leli rayisi nge-cod nama-prawn, lungiselela amanye ama-raicones ambalwa bese uwagcina efrijini ukuze uwadle ezinsukwini ezimbili noma ezinsukwini.
Imifino ratatouille nge-cod
Kula iresiphi yanamuhla besilungile futhi asilethi lutho olunama-caloric amahle noma olusindayo. Ngokuphambene nalokho, ipuleti elicebile nelinempilo le-ratatouille yemifino ene-cod.
Hake nezibopho papillote
Imifino ye-hake nemifino ku-papillote iyashesha futhi kulula ukuyilungisa. Kumele ulungise izithako bese uvumela ihhavini lenze umsebenzi walo.
Hake usoso ngophizi
I-hake in sauce enophizi esiyiphakamisa namhlanje ilula futhi iyashesha, ilungele ukujabulela amaholide kaKhisimusi alandelayo ngaphandle kwezinkinga.
Imisila yeMonkfish enezinhlanzi zasolwandle
Iresiphi yanamuhla inokunambitha kolwandle: Imisila yeMonkfish enezinhlanzi zasolwandle. Isidlo sesibili esifanelekile lapho sinesivakashi ekhaya. Ingabe ufuna ukuzizama?
I-Salmon egqoke i-chive ne-walnut
Ngikukhuthaza ukuthi uzame le salmon ngokugqoka i-chive ne-walnut. Enye indlela yokudla le nhlanzi, elula futhi esheshayo, ukungeza kwimenyu.
Izinkalo ze-tuna ngegalikhi
Funda ukupheka izinkalo ze-Tuna ngezindlela zethu zokupheka ezilula: ewayinini elimhlophe nejusi kalamula ngegalikhi noparsley, isitayela se-Isla Cristina, negalikhi nokuningi!
Ama-tuna steaks ku-tomato sauce
Iresiphi esiyethula kuwe namuhla imnandi futhi imishudo emisha ye-tuna ku-tomato sauce. Iresiphi ekahle uma okufunayo ukucwilisa isinkwa.
I-tuna eyosiwe ngokugqoka
Namuhla silungiselele le-tuna eyosiwe ngokugqoka okusekelwe kumafutha omnqumo nogalikhi, sicabanga ngaphezu kwabo bonke abafundi bethu basolwandle.
I-salmon eboshwe nge-pea pesto
Le salmon eboshiwe ne-pea pesto esiyilungiselela namuhla ilula futhi inempilo, ilungele ukuhlanganiswa kwimenyu yethu yamasonto onke.
I-baked gilthead bream ne-anyanisi, u-garlic kanye neparsley
I-gilthead bream ebhekiwe esiyiphakamisa namhlanje ilula kodwa imnandi. Embhedeni ka-anyanisi, igqoke ngegalikhi noparsley mash.
Ukhilimu we-lobster osheshayo
Namuhla silungiselela ukhilimu we-lobster olula futhi oshibhile uma kwenzeka ukhilimu wasolwandle. Ilungele umkhosi ekhaya.
Ishubhu le-salmon esililungiselela namuhla lilungele ukusebenza njengesiqalo kunoma imuphi umgubho, ngoba lingalungiswa kusengaphambili.
I-salmon eboshwe nge-sauce yesinaphi
Kunezindlela eziningi zokupheka i-salmon. Namuhla sikwenza okugcotshwe nge-sauce yesinaphi kanye nezinhlayiya zesinkwa ezinamakha.
I-tuna ne-pepper pie
Namuhla silungiselela ku-Kitchen Recipes okudala kwe-gastronomy yethu: i-tuna kanye ne-pepper patty. Lihle futhi linamanzi amaningi, lilungele idina ngempelasonto.
Hake nezibopho nge ratatouille
Namuhla sipheka ama-Kitchen Recipes amafishi efriziwe afriziwe nge-ratatouille, isidlo esiphelele kakhulu sokufaka ekudleni komndeni wakho
Izinhlanzi, izimfene ne-squid esitsheni sewayini noparsley
Le recipe siyibize ngokuthi ukunambitheka kolwandle "Fish, prawn and squid in a wine and parsley sauce". Imnandi futhi kulula ukuyenza.
Upelepele wePiquillo ofakwe nge-cod nama-prawns
Namuhla silungiselela ku-Kitchen Recipes upelepele omnandi we-piquillo ohlanganiswe ne-cod nama-prawn; ekahle kula maphathi kaKhisimusi.
Hake nezibopho kalamula
Kwakungakaze kwenzeke kimi ukuthi ngihambisane ne-hake nebhotela elicibilikile. Isifiso sokuzama izinhlanganisela ezintsha singenzanga ...
Hake ngama-prawn ku-tomato sauce
Le recipe yezinhlamvu ze-hake ezinama-prawn ku-tomato sauce ilungele isidlo sasemini esincane noma isidlo sakusihlwa. Kulula ukulungiselela futhi kusheshe!
Ulamula washaya ama-anchovies
Ama-anchovies ashaywayo angenye yalezozitsha ezinqobayo ngenxa yokulula kwazo. Ukuhambisana nolamula bangaba isidlo sakusihlwa esihle.
I-squid ku-sauce kabhiya
I-squid ku-sauce kabhiya isidlo esihlukile lapho usoso unokunambitheka okuhle kakhulu, oqinisekile ukuthi ungakuthanda.
Hake nezibopho nemifino okuphekiwe
Izibopho ze-Hake nemifino ephekiwe ziyindlela enhle kulabo abafuna izindlela zokupheka ezinempilo futhi ezilula.
Ilayisi ne-squid ku-sauce yaseMelika
Irayisi elinama-squid kusoso laseMelika liyinsindiso yami ngoba bekungeke kube lula. Uma unamathini ambalwa e-squid unokuxazululwa kokudla.
Kulabo abangabathandi beqiniso besipuni, sikulethela le Cod Pottage. Kulula impela ...
Isipinashi ne-tuna lasagna
Isipinashi ne-tuna lasagna kuyinto yakudala ekhaya. Ukuhlanganiswa ne-tuna kumnandi futhi futhi kuyindlela elula kakhulu futhi esheshayo.
Ama-gula ane-ajitos aba eminyakeni eminingi edlule esitsheni esijwayelekile saseSpain. Ama-gula noma ama-anguriñas ane ...
Ama-omod we-cod ne-parsley
Lezi zinhlayiya ezimnandi ze-cod ne-parsley zivame ukudliwa okungenani kanye ngenyanga esidlweni endlini yami. I…
I-salmon eboshwe ngoqweqwe lwezinyosi nesaladi
Namuhla sipheka isalmon eyosiwe ngoqweqwe lwezinyosi. Enye indlela emnandi; ikakhulu uma ihambisana nesaladi nge-apula namantongomane.
I-Whiting ephekwe namazambane
Ngiyakhumbula ukuthi okokuqala lapho ngidla lesi sidlo kungesikhathi ngisemncane (ngangineminyaka cishe eyisikhombisa noma eyisishiyagalombili ubudala) ekhaya ...
Ama-bass olwandle abhakiwe endaweni yamazambane no-anyanisi
Sikukhombisa ukuthi ungenza kanjani ama-bass aselwandle abhakwe ngokususelwa kumazambane abhakiwe nanyanisi; isidlo esikhulu sikaKhisimusi.
I-gilthead bream enamakha ebhakwe
I-gilthead bream ebilisiwe ebhakwe kulabo abanqena kakhulu ukudla inyama (nokuningi manje) ... Isitsha esilula, esinezithako ezimbalwa futhi esilungele ngaphezulu nje kwengxenye yehora
I-salmon ngesitshulu: Isitsha esinempilo futhi esifanelekile sokudla.
Ikhodi enamazambane abhakiwe
I-cod enamazambane abhakiwe: ilungele wonke umndeni. Kulula, kunempilo futhi kulula ukukwenza.
I-cauldron kaMurcian yabaqalayo
Ngabe ukunambitheka kwehlobo kunjani? Mhlawumbe lesi simanga se-cauldron kaMurcian sabaqalayo. Isandla sikagogo esikhwameni sakho somfundi.
I-salmon gratin enamakhiwane namazambane
Uma uzingela isidlo esincibilika emlonyeni wakho futhi ungazizwa uthanda ukupheka okuningi, zama ukwenza le salmon gratin ngamakhiwane namazambane.
Amaqanda aqhephukile anesardadi kanye ne-zucchini
Ukudla okusemathinini kuyindlela esebenzisekayo nenempilo yokuqedela imenyu yethu. Zama le iresiphi elula futhi elula yamaqanda aqhekeziwe ngama-sardine ne-zucchini
Ama-anchovies kuviniga: Ilungele lezi zinsuku ezishisayo. I-tapa yama-anchovies afakwe emanzini anosawoti ahambisana nobhiya obandayo kakhulu, injabulo emsulwa!
Ama-meatballs e-Choco ku-carrot sauce
Ama-meatballs e-Cuttlefish ku-carrot sauce, ukunambitheka okukhulu futhi kwehlukile kwamanye ama-meatballs.
Ikhodi esheshayo ngegalikhi kanye ne-paprika yaphinde yakhishwa
I-cod negalikhi ne-paprika refried ingenye yezindlela ezisheshayo esinazo zokwethula le nhlanzi. Ilungele ngemizuzu engu-15.
I-Salmon ene-avocado kanye nokugqoka ama-cherry
Ngalesi iresiphi yesalmon nge-avocado kanye nokugqoka ama-cherry, uletha ingxenye enkulu yokudla okubhekwa njenge-anti-cancer esitsheni esisodwa.
Ipuleti lethenda, elincibilikayo-emlonyeni wakho, eliphelele ngokumnandi futhi elinomsoco? Le iresiphi ye-marmitako yabaqalayo yilokho okudingayo.
Isitshulu seCod, iPhasika elikhethekile
ILagengen, yeka isimangaliso se-cod stew, esikhethekile ngePhasika. I-Lent inikeza amagugu we-gastronomic njengale recipe enhle futhi ephelele kakhulu.
I-fish curry eluhlaza
Kukhona impilo engaphezulu kwenkukhu yenkukhu kanye namafry. Njengobufakazi balokhu, le iresiphi emnandi futhi elula ye-fish curry eluhlaza.
IMajorcan cuttlefish ethosiwe
Le iresiphi ye-Majorcan cuttlefish ilungele ikakhulukazi izingane njengoba iqukethe cishe imifino. Kuyinto iresiphi yendabuko futhi elula kakhulu
Ama-bass olwandle abhakiwe namazambane okubhaka
I-Sea bass iyinhlanzi yenyama emhlophe eyaziswa kakhulu. Kungabhakwa, njengoba senza namuhla, ngamazambane abhakiwe no-anyanisi.
Amabhasi asolwandle abhakwe agcwele uSerrano ham
Kulesi sihloko sikukhombisa okungaba yisidlo esihle ngalesi sikhathi sikaKhisimusi, amabhasi olwandle abhakiwe agcwele inyama enoshukela.
Cod casserole nge-apula
Le cod casserole ne-apple sauce iyisiphakamiso esihle semikhosi ezayo kaKhisimusi. Esihlwabusayo, esheshayo futhi elula.
Ama-noodle anezinhlanzi kanye ne-cuttlefish
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi ecebile futhi enomsoco ngokususelwa kuma-noodle, ama-prawns kanye ne-cuttlefish. Isitsha esinamandla amaningi ukukugcina uhlaziyekile.
Hake nge-sauce eluhlaza
Kwesinye isikhathi sicabanga ngezindlela zokupheka ezinabile kakhulu, noma kunjalo, izindlela zokupheka ezisheshayo nezilula nazo zingaceba njengale hake ngesoso esiluhlaza.
I-cod egxishwe upelepele kusoso
Lezi pepper zifakwe i-cod ku-sauce zikulungele ukukhonza osukwini lwakho nosuku kepha nasemigubho elandelayo.
Ikhekhe elibandayo le-tuna
Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi ejwayelekile ngalesi sikhathi sonyaka ukuze sizivuselele. Ikhekhe le-tuna elilula futhi elisheshayo ukwenza.
I-Hake, ham nemifino skewers
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi enhle enempilo ye-hake skewers esongwe ngeSerrano ham nemifino. Ucebile futhi unempilo kuwe.
Hake ngombala ophuzi
Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi enhle ye-hake ephuzi. Inqubo esetshenziswa kabanzi ekhishini ukudaya ukudla.
I-squid igxishwe usoso
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi ecebile ye-squid efakwe kusoso. Iresiphi enhle yamaLwesihlanu oMlindo ngePhasika noma ngePhasika.
Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi emnandi ye-fideua ne-hake. Isitsha esinamandla futhi esihlwabusayo sanoma yiluphi uhlobo lwedina.
Amazambane ku-batter futhi agcwele i-hake
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungawenza kanjani amazambane amnandi amnandi agcwele i-hake. Isitsha esinothile esigcwele amandla nokunambitheka.
Ama-croquettes emifula eqoshiwe
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungawakha kanjani ama-croquette ezinambuzane ezimnandi. Ngakho-ke, sisebenzisa lelo thoti elincane elizokonakala.
Amaphiko e-Ray ku-pepper sauce, isidlo esikhethekile futhi esihlukile
Ukumangaza izivakashi, amanye amaphiko e-ray acebile ku-pepper sauce. Isitsha esikhetheke kakhulu esizomangaza wonke umuntu.
Imigqa ene-bechamel, isikhangiso esikhethekile sikaKhisimusi
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungenza kanjani ama-prawns amnandi nge-béchamel ngemizuzu eyi-10 nje. Le recipe iyisikhalazo esihle kakhulu sikaKhisimusi.
Upelepele wePiquillo ofakwe ama-prawns nenkukhu nge-béchamel sauce
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungenza kanjani upelepele omnandi we-piquillo ogcwele ama-prawn kanye nenkukhu, isidlo esikhulu sangesikhathi sikaKhisimusi.
Kushaya i-la marinera, iresiphi yokudipha isinkwa
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungenza kanjani amaflamu amnandi ekudleni kwasolwandle noma kusoso. Isidlo esinempilo lapho ungacwilisa khona isinkwa sakho neminwe yakho.
Ama-croquette ePanga ane-béchamel sauce
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungenza kanjani ama-croquette ezinhlanzi nge-béchamel sauce, iresiphi elula kakhulu futhi esheshayo yezingane zokudla izinhlanzi.
ILasagna ene-panga, ubhekeni ne-york ham
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani i-lasagna enhle ngezinhlanzi namasoseji, njenge-ham nebhekoni.
Hake ku-Veloute sauce, isidlo sakusihlwa esisheshayo futhi esilula
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iresiphi elula nesheshayo yesidlo sasebusuku sabashadikazi: I-hake eyosiwe ku-velouté sauce yenziwe ngolunye usuku.
Imfucumfucu irayisi casserole
Kulesi sihloko sikufundisa ukuthi ungakha kanjani ipuleti elihle nelinhle lelayisi elinama-prawns, ukuluma okuzokukitaza.
I-Tuna evela eNyakatho ngotamatisi, kulula futhi esihlwabusayo
Sikukhombisa igxathu negxathu lokwenza i-bonito elula futhi emnandi ngotamatisi usebenzisa i-Bonito del Norte.
I-salmon eyosiwe namazambane abhakiwe
Amazambane abhakiwe ahambisana kakhulu nesalmon, inhlanzi enamaprotheni amaningi kanye ne-omega-3 fatty acids
Iresiphi yezinhlanzi iRoteña, isidlo esijwayelekile seRota (Cádiz)
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungasenza kanjani isidlo esijwayelekile kusuka kumasipala waseRota. Inhlanzi ecebe kakhulu i-roteña, ebalulekile ukunakekela umugqa kuleli hlobo.
Izinhlanzi zezinhlanzi ezicebile ku-tomato sauce
Kulesi sihloko sikufundisa ukuthi ungawakha kanjani ama-meatballs amnandi enhlanzi, ukuze uzokwazi ukujabulela leli Sonto ngokunambitheka okuningi.
Hake papillots nge izaqathe kanye neek
Kulesi sihloko sikunikeza umbono omuhle wokwenza iresiphi enempilo kakhulu ngalezi zinhlanzi nama-papillote emifino.
I-salmon ne-dill sauce
I-salmon ne-dill sauce, iresiphi ephelele ye-salmon. I-Dill ne-salmon zishada kakhulu nokuthi le sauce iyisixazululo esihle kangakanani.
Inhlanzi ebhakwe namazambane, utamatisi kanye izaqathe
Kulesi sihloko sikufundisa ukuthi ungayenza kanjani inhlanzi ebhakwe emnandi kusoso we-vinaigrette, ukuze siqale lo nyaka omusha we-2013 ngokudla okunempilo.
Ama-bass olwandle abhakabhaka, isidlo esifanele ukulandela indlela odla ngayo. Kuyinto iresiphi elula kakhulu futhi enempilo futhi enambitha kakhulu futhi wonke umuntu uyayithanda.
I-cod ejwayelekile ejwayelekile yasePutukezi, esizohambisana nayo namazambane kanye ne-paprika sauce. Kuhle njengesidlo esikhulu esingahamba naso nesaladi.
I-squid eno-anyanisi, ekahle ihambisana nelayisi
Ingwane yengulube eno-anyanisi, iresiphi yendabuko futhi emnandi kakhulu.
I-cod emangalisayo ne-prawn stew iyisifundo esiyinhloko. Kuphelele ukuqala kokupheka ukuqala. Isitsha esingabizi futhi esilula.
Soles with utamatisi
Amathe amisiwe athosiwe ku-tomato sauce
I-Fritos de pixin (monkfish)
I-Pixin igama elinikezwa i-monkfish e-Asturias. Lezi zithosiwe ziyisikhangisi esifanelekile, inkambo eyinhloko noma isidlo sakusihlwa-
Ikhekhe le-Salmon ne-prawn, elilungele imicimbi ekhethekile
Iresiphi elula nekhawulezayo salmon ne-prawn cake. Leli khekhe limnandi kakhulu futhi lizothanda ngisho nabancane. Mangaza lo christmas
IMarmitako iresiphi elula kakhulu, ephelele futhi emnandi yaseBasque. Singakwenza nge-bonito noma nge-tuna futhi, ...
Inhlanzi ebhakwe ingaxazulula idina elisheshayo futhi elimnandi. Ngihlala nginenhlanzi engibhaka kuyo ...
Hake embhedeni wepea
Hake embhedeni wophizi, iresiphi elula futhi engabizi kakhulu wonke amalungu omndeni azoyithanda
Ama-tuna tacos notamatisi
Iresiphi elula yama-tuna tacos notamatisi. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela ubumnandi.
Imicu ye-hake ebhakwe, eneshizi enamakhambi notamatisi omisiwe nge-basil nogalikhi.
I-Swiss chard enesaladi lokudla kwasolwandle
Iresiphi elula ye-chard ene-salpicon yasolwandle. Ake sibone igxathu negxathu ukujabulela lesi sibiliboco esimnandi.
Inyama yenyama yamazambane kanye ne-cuttlefish
Iqedile iresiphi yenyama yamazambane kanye ne-cuttlefish. Ake sibone igxathu negxathu lokwenza iresiphi yanamuhla.
Ama-Meatballs ane-Cuttlefish nama-Peas
Iresiphi elula yenyama yenyama ene-cuttlefish nophizi. Ake sibone igxathu negxathu ukuze sikujabulele lokhu kudla.
I-Sea Bass Fillet ene-Garlic ne-Paprika
Iresiphi yolwandle bass fillet ngegalikhi kanye ne-paprika, ake sibheke igxathu negxathu ukujabulela ukulungiswa kwayo nokunambitheka kwayo.
I-squid yobuciko ene-Lemon ne-Garlic Vinaigrette
Iresiphi emnandi nelula ye-squid yobuciko eyosiwe ene-lemon ne-garlic vinaigrette. Sizobona igxathu negxathu ukujabulela isibiliboco.
I-Salmon ebhakiwe namazambane
Iresiphi ebhakwe nge-salmon namazambane, indlela enhle yokulungisa le nhlanzi eyingqayizivele nge-flavour enamandla. Ake sibone igxathu negxathu lale iresiphi emnandi.
Inkukhu enezinkukhu kanye nobhiya
Iresiphi elula yenkukhu kabhiya enama-prawn. Ake sibone igxathu negxathu ukukujabulela.
Ama-Salmon Rolls Ngelayisi
Iresiphi elula yama-salmon rolls nelayisi. Ngokuthintwa kwase-Asia, kuyisibiliboco esihle okufanele ukusizama.
I-Surimi Rolls ene-Asparagus yasendle
Iresiphi yama-surimi rolls ane-asparagus yasendle. Isidambisi esilula nesiphundu, kanye nesokuqala ukumangaza wonke umuntu.
Isaladi ye-artichoke ecebile enezithako ezahlukahlukene kusoso osekheniwe. Njengama-anchovies, i-piquillo njll. Kulula futhi ukulungiselela.
Izindandatho ze-squid ezinamakhowe
Iresiphi elula nenempilo yamasongo e-squid enamakhowe. Ukulungiswa kwayo kulula futhi ngeke kudingeke sichithe amahora amaningi ekhishini.
IMonkfish iyinhlanzi ehamba kahle nakho konke futhi namhlanje ngiyiletha kuwe ngokuhlobisa okuhle kakhulu (okungenani kimi), upelepele oluhlaza kanye nama-chanterelles.
I-cod enamaqanda nama-Raisin
Iresiphi efanelekile yezinsuku zeLenten, kepha iqiniso ukuthi kuyisibiliboco esimnandi esihlangana nanoma yiluphi usuku. Iphinde ihlanganise izithako eziningana ezinikeza ukunambitheka okukhethekile okumnandi nokumuncu.
Amathumbu we-squid agxishiwe
Iresiphi esuselwa kumashubhu e-squid agcwele inyama egayiwe Kuyinto enhle, elula elula ukuyilungisa futhi enikeza imiphumela emihle ezingeni lesethulo. Ingabuye igcwale imifino.
Iresiphi esuselwa kufishi, i-cod, nemifino, upelepele, isitshalo seqanda notamatisi. Ilula futhi icebile, ilungele usuku lweLenten noma olunye usuku. Khumbula ukuthi i-cod ingashintshelwa enye inhlanzi.
Kushayisana neSauce eshisayo
Iresiphi yesikhalazo esingaba khona esuselwa kuma-clams ane-sauce eshisayo. Ngiyilungisa nge-cayenne kepha ingenziwa ngaphandle ukuze ingalumi, lokho kuya ngomthengi. Kuyashesha ukulungiselela.
Izingulube zeNgulube ezineScampi
Ama-trotter engulube ane-scampi recipe. Kulula ukukwenza, kepha kuthatha isikhathi ukupheka izandla kahle, ezinye izinyathelo ziyashesha. Kuyisidlo esikhethekile engisithandayo.
Imisila yeMonkfish enama-Clams namaKhowe
Imisila ye-Monkfish ene-clams namakhowe iresiphi. Kulula ukuyilungiselela, kumele sicabangele ukufaka izimbaza emanzini nasosawoti kuphela. Yinhlanganisela emnandi yolwandle nezintaba.
Indlela ehlukile yokulungisa izinhlanzi. I-Pickled mackerel, kulula ukuyilungisa futhi imnandi, ngokususelwa kugalikhi, iparsley, uviniga, uwoyela, iqabunga le-bay ne-mackerel enengqondo
Hake fillets isitayela Neapolitan
Izibopho ze-Hake zingukudla okungafanele kulahleke ekudleni kwethu kwamasonto onke, ngakho-ke namuhla ...
I-Mackerel loin recipe evela eBilbao
Izithako: 2 plywood mackerel. 4 amazambane aphakathi. 3 ugalikhi. 1 upelepele Amafutha omnqumo e-Virgin. Usawoti Vinegar kanye neparsley Ukulungiselela: ...
I-sea bream tagine enemifino
Izithako: 1kg we-sea bream 1 zucchini 2 turnips 4 utamatisi 3 amazambane aphakathi 1 anyanisi 4 garlic clove ...
Isitayela seBream Donostiarra
Izithako: I-4 sea bream 1/2 chilli Ijusi le-1/2 kalamula 1 i-clove kagalikhi Amafutha omnqumo izipuni ezine ze ...
Hake nezibopho namazambane ecubuziwe
Ipuleti lokudla esizolungisa namuhla wukudla okuhle kakhulu okwenzelwe umndeni wonke ukuthi ukujabulele futhi kube ...
Izithako: 300g wamakhodi asetsheziwe 1 upelepele obomvu 1 upelepele oluhlaza 1 upelepele ophuzi 1 anyanisi 1 iqanda lama chives 2…
I-Salmon ene-leek ne-pine nut sauce
Izithako: 2 amaliki Parsley Slice salmon umuntu ngamunye 3 wezipuni zikaphayini amantongomane 1 ingilazi yobisi Nutmeg upelepele omhlophe ...
I-Rosada ne-almond sauce
Namuhla ngizokwethulela isidlo esikahle sedina lothando ongakhombisa ngalo. Ingabe ufuna ukuzama? Khathazeka nje ...
Imisila yeMonkfish enokhilimu namantongomane ephayini
Ufuna iresiphi esheshayo futhi emnandi? Lungisa le misila ye-monkfish ngokhilimu nama-pilones. Ngeke uzisole. Izithako:…
I-salmon enama-prawn, ama-gula nokhilimu
Izithako: Iphakethe elilodwa lama-gulas 1 ml ukhilimu ama-salmon tincetu ezi-500/4 kg zamaphrawuni ama-clove amabili we ...
Isifo sikashukela: izinhlanzi ezifakwe nge-sauce yesipinashi
Lesi sidlo esishisayo esimnandi siyindlela yokupheka enempilo futhi sizosebenzisa imicu yezinhlanzi njengokudla okunomsoco kubo bonke ...
Izithako: 1 ikhilo lezimfanzi ezihlanzekile. 50 amagremu webhotela. I-clove e-1 kagalikhi ngaphambilini igayiwe. 1 ingilazi kagologo….
Izithako: Ama-Smoothies ama-6 noma ama-Hake Fillets
Izithako: 1½ kg. Kuma-eel amancane, ½ ilitha leviniga, ½ ilitha lamafutha (kuzosala), Ufulawa ku ...
Ngethula namuhla iresiphi ecebe kakhulu ukunikeza izinhlanzi ezilungiselelwe ngenye indlela komncane futhi cha ...
Izinhlanzi zingahlanganiswa nokudla okuningi, kepha ake sibheke ukuthi uzizwa uyisiphephetha somoya: Izithako: i-1 silverside ...
Intambo ye-albacore eshubile
Zama i-steak ekhethekile eshubile namuhla: Izithako: I-Albacota (i-tuna emhlophe) i-800g Baby zuchini 100 g Ingane yezimboni i-100 g ...
Ama-sandwich awukudla okushesha kakhulu ukukulungisa, futhi uma ungeza izithako ezithile ezicebile kuwo, azokunikeza ...
Njengoba sazi, inhlanzi inezinzuzo ezingenakubalwa zomzimba. Namuhla ngizokwethulela iresiphi ...
INGREDIENTS: 16 iqhude nezibopho. 2 izingilazi zobisi Usawoti, ufulawa namafutha. Okwe-sauce: - 1 ingilazi ye ...
I-COD A LA GALLEGA (Ukulungiselela ku-Thermomix)
Izithako: - Izibopho ezi-2 ezibandisiwe zamakhodi - amagremu angama-600 amazambane ukubilisa - amagremu ama-400 wamanzi - ...
INDLELA YOKWENZA I-ADOBO YENHLANZI NGAPHANDLE KWENGXENYE KOSWALI
Izithako: - ulamula - i-clove - igalikhi - i-paprika UKULUNGISELELA: Kuthileyi lengilazi sibeka izingilazi ezimbili noma ezintathu ...